FAMBOLENA KORONTANA : Maty momoka ary tsy nisy vokany ny fitakian’ny Tim
Very an-jevony tanteraka ary tsy hita mazava ny vokatr’ ilay hetsika fitakiana nataon’ny Tim. 15 janvier 2020
Hetsika nambaran’izy ireo fa hitakiana ny marina mahakasika ny fifidianana Ben’ny tanàna sy mpanolotsaina izay natao tamin’ny 27 novambra lasa teo iny. Tsy nanaiky ny fahareseny ny Tim ary niahiahy hosoka tamin’ny lisi-pifidianana izay nampiasaina nandritra ny fifidianana. Mazava anefa ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana fa tsy misy mitombina avokoa ireo fitoriana napetrany. Nanizingizina ny filoha nasionalin’ny antoko Tim fa mazava be ny fitoriana napetrak’izy ireo miaraka amin’ny vavolombelona.
An-kilany anefa ny Fitsarana dia nanamafy fa tsy ampy ny porofo. Midika izany fa nikasa hanao bontolo indray ny Tim tamin’iny fifidianana. Nanantena ny mbola hibata fandresena kanefa tsy araka ny noheveriny ny zava-nitranga. Nilaza ireo lohandohan’ny mpisorona eo anivon’ny antoko fa hanao hetsika mipoaka sy goavana kanefa hatreto tsy nandrenesam-peo intsony. Nandritra ilay hetsika fidinana an-dalambe nokasain’izy ireo hatao teny Anosy aza dia zara raha nisy olona tonga nanotrona azy ireo. Tsy mety tonga saina ny Tim fa efa ahanjahanjan’ny vahoaka eny an-dalam-be.
Taorian’ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy iny dia mbola nandrahona ny hanao hetsika sy hanohy ny tolona ihany izy ireo kanefa toa nangingina hatramin’izao. Ny Ben’ny tanàna teo aloha, Ravalomanana Lalao aza vao nahare ny voka-pifidianana ofisialy avy hatrany dia nangorona ny entany tao amin’ny Kaominina. Midika izany fa manaiky resy ity farany ary manaiky fa efa naloan’ny vahoakan’Antananarivo.
Ny famindram-pahefana aza raha afaka andro vitsy. Anisany tena andraindrain’ny vahoakan’Antananarivo fatratra ny hisian’ny fampandrosoana ato anatin’ny fotoana fohy. Andraindrain’ny rehetra ihany koa ny hisian’ny fitsirihana amin’ireo lalam-bolan’ny Kaominina ka ahafantarana izay fototra nahatonga ny tanàna tsy handroso tao anatin’izay efa-taona teo aloha izay.
Banner lehibe Gauche 200px × 200px (68197) 24 février 2020 Banner faharoa 500px x 70px (638) 24 février 2020 Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy FANOLANAN-JANAKA (343) 21 février 2020 Niatrika famotorana savaranonando omaly maraina NY RADO RAFALIMANANA (227) 19 février 2020 Nidina ifotony nijery ny fanamboarana ny Kianja Barea ny Filoham-pirenena FANATANTERAHANA NY VELIRANO (215) 18 février 2020 Zandary iray nitifitra nahafaty ny Raibeny, nitifi-tena koa izy ka maty AMBALAVAO (195) 18 février 2020